Malunga nathi -Shanghai Yubing Equipment Co., Ltd.
Singumvelisi ophambili wezixhobo zokupholisa ezikumgangatho ophezulu (ezigubungela iicooler ezivulekileyo nezivaliweyo, izipholisi zomoya okhupha umoya kunye nezinto ezipholileyo zomoya) kunye nezixhobo ezifanelekileyo zonyango lwamanzi (unyango lwamanzi e-RO, ukuhluza kunye nokucoca ulwelo, Ukuthambisa Amanzi, Inkqubo yokuchithwa kweMichiza kunye neNkunkuma ye-MBR Inkqubo yonyango lwamanzi) phantse iminyaka engama-20 ulwazi kunye namava.
Kumashumi eminyaka, sibonelele ngezixhobo ezisemgangathweni kunye nenkonzo kubathengi bethu kwaye beliqabane elaziwayo kumashishini amaninzi kubandakanya amandla, ioyile kunye negesi, ishishini elinzima, ishishini le-petrochemical, izityalo zamandla, izinto zokucoca i-petroleum, pulp & mills, iifektri zentsimbi, izicelo zemigodi, icandelo lokutya kunye nezixhobo ezenziwe ngokwezifiso kwiindawo zoluntu ezinje ngesakhiwo seofisi, isikhululo sendlela kaloliwe.
Ngexesha lentsebenziswano nabathengi kwicandelo lezemizi-mveliso, sanikwa uxanduva lokubonelela ngezixhobo ezifanelekileyo zokucoca amanzi ukusuka kwingcaciso yamanzi ukuya kwinkqubo yokurisayikilisha kwamanzi amdaka. Amava anqabileyo kunye nobuchule obunzulu busenze ukuba sibe yingcali kule nkalo.
Iqela lethu lobunjineli ziingcali kupholiso loyilo lwenqaba yokunyusa ukusebenza ngokukuko ngelixa liqinisekisa ukuthotyelwa kwemvume yokusebenza efanelekileyo kwaye inkampani yethu iyabhetyebhetye ukuziqhelanisa ngokulula neemeko neemeko zabathengi bethu ngelixa sigxile kwiimfuno zabathengi ngokubanzi njengokucwangciswa kwendawo, amanzi kunye umgangatho womoya, iindleko ezivavanyiweyo, ukusebenza ngokukuko kunye nokuthembeka kwexesha elide kunye nobungcali kwishishini.
Iqela elinamandla le-ICE lijonge phambili ekuqhubekeni kwempumelelo efanayo kunye nabathengi bethu kwihlabathi liphela.
Ukubonelela ngemveliso, uqoqosho kunye neemveliso ezihlala ixesha elide kunye neenkonzo ngokuhambelana
iimfuno kunye nolindelo lwabathengi bethu.
Iinqaba zethu zokupholisa ziyilelwe ukuba zizinze kwaye
inefuthe elisezantsi lokusingqongileyo.
- UMNQOPHISO WETHU -
Ingcali enamava + yokuqhubekeka phambili izixhobo + Abasebenzi abaqeqeshiweyo phantsi kwekhowudi yokusebenza ekhutshiweyo
yiNkqubo yoLawulo loMgangatho = 100% imveliso ukoneliseka
IXABISO LETHU -
Intshayelelo yeSiseko seMveliso
Indawo yokuvelisa i-ICE ekwiPhondo laseShandong enamancedo kumaziko axhotyiswe kakuhle, abasebenzi abaqeqeshiweyo aboneleyo kunye nemithombo yomhlaba, kunye nomgaqo-nkqubo wasekhaya wokuxhasa kuphuculo kunye nokuphuculwa kwetekhnoloji.
Imveliso engqingili isetyenziswa kwisiseko sethu sokuvelisa ukuqinisekisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezineempawu zokhuphiswano, okwangoku, inika ubhetyebhetye ngokwexesha lokukhokela kunye namandla emveliso, ngakumbi iprojekthi eyenzelwe wena.
Izixhobo zokwenza imveliso